11.02.21 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– प्राणेश्वर बाबा आउनु भएको छ तिमी बच्चाहरूलाई प्राणदान दिन , प्राणदान मिल्नु अर्थात् तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्नु।”
ड्रामाको हरेक रहस्यलाई जानेका हुनाले कुनचाहिँ दृश्य तिम्रो लागि नयाँ लाग्दैन?
यस समय सारा दुनियाँमा जुन हंगामा छ, विनाश काले विपरीत बुद्धि बनेर आफ्नै कुलको नाश गर्नको लागि अनेक साधन बनाउँदै जान्छन्। यो कुनै नयाँ कुरा होइन किनकि तिमीले जानेका छौ– यो दुनियाँ त परिवर्तन हुनु नै छ। महाभारत लडाईंपछि नै हाम्रो नयाँ दुनियाँ आउँछ।
यह कौन आज आया.....
सबेरै-सबेरै यो को आएर मुरली बजाउनुहुन्छ? दुनियाँ त बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छ। तिमीले अहिले मुरली सुनिरहेका छौ, ज्ञान सागर, पतित-पावन प्राणेश्वर बाबासँग। उहाँ हुनुहुन्छ प्राण बचाउने ईश्वर। भन्छन् नि– हे ईश्वर यस दु:खबाट बचाउनुहोस्। उनले हदको मदत माग्छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई मिल्छ बेहदको मदत किनकि बेहदको बाबा हुनुहुन्छ नि। तिमीले जानेका छौ– आत्मा पनि गुप्त छ। बच्चाहरूको शरीर प्रत्यक्ष छ। बाबाको श्रीमत हो बच्चाहरूप्रति। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणी गीता प्रसिद्ध छ। केवल त्यसमा नाम लेखिदिएका छन् श्रीकृष्णको। अब तिमीले जानेका छौ– श्रीमत भगवानुवाच हो। यो पनि बुझेका छौ– भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठाचारी बनाउने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले नरबाट नारायण बनाउनु हुन्छ। कथा पनि छ– सत्य नारायणको। गायन गरिन्छ– अमरकथा। अमरपुरीको मालिक बनाउने अथवा नरबाट नारायण बनाउने कुरा एकै हो। यो हो मृत्युलोक। सृष्टि अमरपुरी थियो। यो कसैलाई पनि थाहा छैन। यहाँ नै अमर बाबाले पार्वतीहरूलाई अमरकथा सुनाउनु भएको हो। एक पार्वती वा एक द्रोपदी मात्र थिएनन्। यो त धेरै बच्चाहरूले सुनिरहेका छन्। शिवबाबाले सुनाउनु हुन्छ ब्रह्माद्वारा। बाबा भन्नुहुन्छ– मैले ब्रह्माद्वारा प्यारा बच्चाहरूलाई सम्झाउँछु। बाबाले सम्झाउनु भएको छ– प्यारा बच्चाहरू! आत्म-अभिमानी अवश्य बन्नु छ। बाबाले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। दुनियाँमा एउटा पनि मनुष्य छैन, जसलाई आत्माको ज्ञान होस्। आत्माको नै ज्ञान छैन भने परमात्माको ज्ञान कसरी हुन सक्छ? भनिदिन्छन्– हामी आत्मा नै परमात्मा। सारा दुनियाँ कति ठूलो भूलमा फँसेको छ। बिल्कुलै पत्थर बुद्धिका छन्। बेलायतका पनि पत्थरबुद्धिका कम छैनन्। यो बुद्धिमा आउँदैन– हामीले यो जुन बम आदि बनाइरहेका छौं, यसबाट त आफ्नो पनि नाश गर्न, सारा दुनियाँको पनि नाश गर्नको लागि बनाइरहेका छौं। यस समयमा बुद्धि कुनै कामको छैन। आफ्नै विनाशको लागि सारा तयारी गरिरहेका छन्। तिमी बच्चाहरूको लागि यो कुनै नयाँ कुरा होइन। जानेका छौ– ड्रामा अनुसार उनीहरूको पनि पार्ट छ। ड्रामाको बंधनमा बाँधिएका छन्। पत्थरबुद्धि नभइकन यस्तो काम कहाँ गर्न सक्छन् र? सारा कुलको विनाश गरिरहेका छन्। आश्चर्य छ नि– के गरिरहेका छन्! आज ठीक चलिरहेका छन्, भोलि मिलेट्री रिसाए भने राष्ट्रपतिलाई पनि मारिदिन्छन्। यस्ता-यस्ता घटना भइरहन्छन्। कसैलाई पनि सहन गर्दैनन्। पावरफुल छन् नि। आजकलको दुनियाँमा हंगामा धेरै भइरहन्छन्, पत्थरबुद्धिका पनि अथाह छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– विनाश कालमा जो बाबासँग विपरीत बुद्धि छन्, उनको लागि विनश्यन्ति गायन गरिएको छ। अब यो दुनियाँ परिवर्तन हुनु छ। यो पनि जानेका छौ– वास्तवमा महाभारत लडाईं भएको थियो। बाबाले राजयोग सिकाउनु भएको थियो। शास्त्रहरूमा त सम्पूर्ण विनाश देखाइएको छ। तर सम्पूर्ण विनाश त हुँदैन, फेरि त प्रलय हुने भयो। मनुष्य कोही पनि रहने छैनन्, केवल ५ तत्त्व रहन्छन्। तर यस्तो त हुन सक्दैन। प्रलय हुने हो भने त फेरि मनुष्य कहाँबाट आउने? देखाउँछन्– श्रीकृष्ण औंला चुस्तै पीपलको पातमा सागरमा आए। बालक यसप्रकार कसरी आउन सक्छन्? शास्त्रहरूमा यस्ता-यस्ता कुरा लेखिदिएका छन्, कुरै नगर। अब तिमी कुमारीहरूद्वारा यी विद्वान, भीष्म पितामह आदिलाई पनि ज्ञान बाण लाग्नु छ। उनीहरू पनि पछि गएर आउने छन्। जति-जति तिमीले सेवामा जोड गर्छौ, बाबाको परिचय सबैलाई दिइरहन्छौ, त्यति तिम्रो प्रभाव बढ्छ। हो, विघ्न पनि पर्छन्। यो पनि गायन गरिएको छ– आसुरी सम्प्रदायकाले यस ज्ञान यज्ञमा धेरै विघ्न पार्छन्। यो के हो, बिचरा पत्थरबुद्धिका मनुष्यले केही जानेका छैनन् भन्छन्। भन्छन्– यिनीहरूको त ज्ञान नै भिन्नै छ। यो पनि बुझेका छौ– नयाँ दुनियाँको लागि नयाँ कुरा हो। बाबा भन्नुहुन्छ– यो राजयोग तिमीलाई अरू कसैले सिकाउन सक्दैन। ज्ञान र योग बाबाले नै सिकाइरहनु भएको छ। सद्गति दाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ नै पतित-पावन हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य पतितहरूलाई नै ज्ञान दिनुहुन्छ नि। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– हामी पारसबुद्धि बनेर पारसनाथ बन्छौ। मनुष्यहरूले मन्दिर कति धेरै बनाएका छन्। तर उनीहरू को हुन्, के गरेर गएका हुन्? अर्थ केही पनि जानेका छैनन्। पारसनाथको पनि मन्दिर छ, तर कसैलाई पनि थाहा छैन। भारतखण्ड पारसपुरी थियो, सुन, हीरा-जुहारतहरूका महल थिए। हिजोको कुरा हो। उनीहरूले त लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्, केवल एक सत्ययुगलाई। तर बाबा भन्नुहुन्छ– सारा ड्रामा नै ५ हजार वर्षको हो। त्यसैले भनिन्छ– आजको विश्व के छ! हिजो के थियो! लाखौं वर्षको त कसैलाई स्मृति रहन सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई अब स्मृति आएको छ। जानेका छौ– बाबा हर ५ हजार वर्षपछि आएर हामीलाई स्मृति दिलाउनु हुन्छ। तिमी बच्चाहरू स्वर्गको मालिक थियौ। ५ हजार वर्षको कुरा हो। यी लक्ष्मी-नारायणको राज्य कहिले थियो? कति वर्ष भयो? यसरी कसैसँग पनि सोध्यौ भने भनिदिन्छन्– लाखौं वर्ष। तिमीले सम्झाउन सक्छौ– यो त ५ हजार वर्षको कुरा हो। भन्छन् पनि– क्राइस्ट भन्दा यति समय पहिला स्वर्ग थियो। बाबा आउनु हुन्छ नै भारतमा। यो पनि बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ– बाबाको जयन्ती मनाउँछन् भने अवश्य केही गर्न आउनु भएको थियो। पतित-पावन हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य आएर पावन बनाउनु हुन्छ। ज्ञान सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य ज्ञान दिनुहुन्छ नि। योगमा बस, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर– यो ज्ञान भयो नि। ती त हुन् हठयोगी। गोडामाथि गोडा चढाएर बस्छन्। के-के गर्छन्। तिमी माताहरूले त यस्तो गर्न सक्दैनौ। बस्न पनि सक्दैनौ। बाबा भन्नुहुन्छ– मीठे बच्चे, यो केही गर्ने तिमीलाई आवश्यकता छैन। विद्यालयमा विद्यार्थी मर्यादा अनुसार बस्छन् नि। बाबाले त त्यो पनि भन्नुहुन्न। जसरी चाह्यो, त्यसैगरी बस। बस्दा बस्दै थाक्यौ भने ठीक छ सुत। बाबाले कुनै कुरामा मनाही गर्नुहुन्न। यो त बिल्कुल सहजै बुझ्ने कुरा हो। चाहे बिरामी नै भए पनि, यसमा कुनै कष्टको कुरा छैन। सुन्दा-सुन्दै शिवबाबाको यादमा रहँदा-रहँदै प्राण तनबाट निस्कियोस्। गायन गरिन्छ नि– गंगाको तट होस्, गंगा जल मुखमा होस् तब प्राण तनबाट निस्कियोस्। ती त सबै हुन् भक्ति मार्गका कुरा। वास्तवमा यो ज्ञान अमृतको कुरा हो। तिमीले जानेका छौ– वास्तवमा यसरी नै प्राण निस्कनु पर्छ। तिमी बच्चाहरू आउँछौ परमधामबाट। मलाई छोडेर आयौ। बाबा भन्नुहुन्छ– म त तिमी बच्चाहरूलाई साथमा लिएर जान्छु। म आएको हुँ तिमी बच्चाहरूलाई घरमा लिएर जानको लागि। तिमीलाई न आफ्नो घरको बारेमा थाहा थियो, न आत्माको बारेमा थाहा थियो। मायाले बिल्कुलै पंख काटिदिएको छ, त्यसैले आत्मा उड्न सक्दैन किनकि तमोप्रधान छ। जबसम्म सतोप्रधान बन्दैन, तबसम्म शान्तिधाममा जान कसरी सक्छ? यो पनि जानेका छौ– ड्रामा योजना अनुसार सबैलाई तमोप्रधान बन्नु नै छ। यस समयमा सारा वृक्ष बिल्कुल तमोप्रधान, जीर्ण भएको छ। बच्चाहरूले जानेका छन्– सबै आत्माहरू तमोप्रधान छन्। नयाँ दुनियाँमा हुन्छन् सतोप्रधान। यहाँ कसैको सतोप्रधान अवस्था हुन सक्दैन। आत्मा पवित्र बनेपछि त फेरि यहाँ रहन सक्दैन, एकदम गइहाल्छ। सबैले भक्ति गर्छन् नै मुक्तिको लागि अथवा शान्तिधाममा जानको लागि। तर कोही पनि फर्केर जान सक्दैन। नियमले भन्दैन। बाबाले यो सबै रहस्य बसेर सम्झाउनु हुन्छ धारणा गर्नको लागि। फेरि पनि मुख्य कुरा हो बाबालाई याद गर्नु, स्वदर्शन चक्रधारी बन्नु। बीजलाई याद गर्दा सारा वृक्ष बुद्धिमा आउँछ। वृक्ष पहिला सानो हुन्छ फेरि बढ्दै जान्छ। अनेक धर्म छन् नि। तिमीले एक सेकेण्डमा जानेका छौ। दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन। मनुष्य सृष्टिको बीजरूप सबैको एक बाबा हुनुहुन्छ। पिता कहिल्यै सर्वव्यापी कहाँ हुन सक्छन् र। यो महान् भूल हो। तिमीले सम्झाउँछौ पनि– मनुष्यलाई कहिल्यै भगवान् भनिदैन। बाबाले बच्चाहरूलाई सबै कुरा सहज बनाएर सम्झाउनु हुन्छ, फेरि जसको तकदिरमा छ, निश्चय छ भने उसले अवश्य बाबाबाट वर्सा लिन्छ। निश्चय छैन भने कहिल्यै पनि बुझ्न सक्दैन। तकदिर नै छैन भने फेरि पुरुषार्थ पनि गर्दैन। तकदिरमा छैन भने ऊ यसरी बस्छ मानौं केही पनि बुझेको छैन। यति पनि निश्चय हुँदैन– बाबा आउनु भएको छ, बेहदको वर्सा दिन। जसरी कोही नयाँ मानिस मेडिकल कलेजमा गएर पढ्न बस्यो भने के बुझ्ला? केही पनि बुझ्दैन। यहाँ पनि यस्ता आएर बस्छन्। यस अविनाशी ज्ञानको विनाश हुँदैन। यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ– राजधानी स्थापना हुनु छ नि। त्यसैले नोकर-चाकर प्रजा, प्रजाका पनि नोकर-चाकर सबै चाहिन्छ नि। त्यसैले यस्ता पनि आउँछन्। कसैलाई त धेरै राम्रोसँग समझमा आउँछ। विचारमा पनि लेख्छन् नि। पछि गएर केही चढ्ने कोसिस गर्नेछन्। तर त्यतिबेला हुन्छ मुश्किल किनकि धेरै हंगामा हुन्छ। दिन-प्रतिदिन तुफान बढ्दै जान्छ। यतिका सेन्टरहरू छन्। राम्रोसँग बुझ्छन्। यो पनि लेखिएको छ– ब्रह्माद्वारा स्थापना। विनाश पनि सामुन्ने देख्छन्। विनाश त हुनु नै छ। सरकारले भन्छ– जन्म कम होस्, तर यसमा के नै गर्न सक्छ र? वृक्षको वृद्धि त हुनु छ। जबसम्म बाबा हुनुहुन्छ, तबसम्म सबै धर्मका आत्माहरूलाई यहाँ रहनु नै छ। जब जाने समय हुन्छ, तब आत्माहरू आउन बन्द हुन्छ। अहिले त सबैलाई आउनु नै छ। तर यो कुरा कसैले बुझ्दैन। बापुजीले पनि भन्दथे– रावण राज्य हो, हामीलाई रामराज्य चाहिन्छ। भन्छन्– फलाना स्वर्गवासी भयो, यसको मतलब यो नर्क हो नि। मनुष्यले यति पनि बुझ्दैनन्। स्वर्गवासी भयो त राम्रो हो नि। अवश्य नर्कवासी थियो। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– मनुष्यहरूको चेहरा मनुष्यको छ, चालचलन बाँदरको छ। सबैले गाइरहन्छन्– पतित-पावन सीताराम। हामी पतित हौं, पावन बनाउने वाला हुनुहुन्छ बाबा। ती सबै हुन् भक्ति मार्गका सीताहरू, बाबा हुनुहुन्छ राम। कसैलाई सीधा भन्यौ भने मान्दैनन्। रामलाई बोलाउँछन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले तेस्रो नेत्र दिनु भएको छ। तिमी मानौं अलग दुनियाँका हौ। पुरानो दुनियाँमा के-के गरिरहन्छन्। अहिले बुझेका छौ। तिमी बच्चाहरू बेसमझदारबाट समझदार बनेका छौ। रावणले तिमीलाई कति बेसमझदार बनाइदिएको छ। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– यस समयमा सबै मनुष्य तमोप्रधान बनेका छन्। त्यसैले त बाबा आएर सतोप्रधान बनाउनु हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– ठीकै छ तिमी बच्चाहरूले आफ्नो नोकरी पनि गरिराख। केवल एउटा कुरा याद राख– बाबालाई याद गर्नु छ। तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्ने मार्ग अरू कसैले बताउन सक्दैन। सबका रूहानी सर्जन एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै आएर आत्माहरूलाई इन्जेक्शन लगाउनु हुन्छ किनकि आत्मा नै तमोप्रधान बनेको छ। बाबालाई अविनाशी सर्जन भनिन्छ। अहिले आत्मा सतोप्रधानबाट तमोप्रधान बनेको छ, यसलाई इन्जेक्शन चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर आफ्नो बाबालाई याद गर। बुद्धियोग माथि लगाऊ। जीवन छँदै माथि फाँसीमा लट्किइराख अर्थात् बुद्धियोग स्वीट होममा लगाऊ। हामी स्वीट साइलेन्स होममा जानु छ। निर्वाणधामलाई स्वीट होम भनिन्छ। अच्छा!
१) यो पुरानो दुनियाँ विनाश हुनु नै छ, त्यसैले यसबाट आफूलाई अलग सम्झनु छ। वृक्षको वृद्धिको साथ-साथै जो विघ्न रूपी तुफान आउँछन्, त्यससँग डराउनु छैन, पार हुनु छ।
२) आत्मालाई सतोप्रधान बनाउनको लागि आफूलाई ज्ञान-योगको इन्जेक्शन दिनु छ। आफ्नो बुद्धियोग स्वीट होममा लगाउनु छ।
आफ्नो भाग्य र भाग्य विधाताको स्मृतिद्वारा सबै उल्झनहरूबाट मुक्त रहने मास्टर रचयिता भव
सदा वाह मेरो भाग्य र वाह भाग्य विधाता! मनको यस सूक्ष्म आवाजलाई सुनेर खुसीमा नाँचिराख। जान्नु थियो त्यो जानेँ, पाउनु थियो त्यो पाएँ– यसै अनुभवमा रह्यौ भने सबै उल्झनहरूबाट मुक्त हुन्छौ। अब उल्झनमा परेका आत्माहरूलाई निकाल्ने समय हो त्यसैले मास्टर सर्वशक्तिमान हुँ, मास्टर रचयिता हुँ– यही स्मृतिद्वारा बचपनको साना-साना कुरामा समय नगुमाऊ।
कमल आसनधारी नै मायाको आकर्षणबाट न्यारा, बाबाको स्नेहमा प्यारा, श्रेष्ठ कर्मयोगी हो।